HALKAAN KA AQRISO W.W MOGTIMES EE SAAKAY OO AH 3-SEP-2020
Thursday September 03, 2020 - 08:53:20 in Wararka by Mogadishu Times
Kulankii Madaxweyne Farmaajo, Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo baaqday Warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka he lay ilo wareed muhiim ah ayaa sheegaya inuu baaqday Kulankii Xalay la filayay inay yeesh aan Madaxweyne Farmaajo iyo Madax weynayaa
Kulankii Madaxweyne Farmaajo, Saciid Deni iyo Axmed Madoobe oo baaqday Warar lagu kalsoonaan karo oo aan ka he lay ilo wareed muhiim ah ayaa sheegaya inuu baaqday Kulankii Xalay la filayay inay yeesh aan Madaxweyne Farmaajo iyo Madax weynayaasha Puntland iyo Jubbaland. Sababaha shirka u baaqday ayaa ah Shur uud ka timid Jubbaland oo ku saabsan arrinta Gobolka Gedo oo ah in Dowladda Federaalka ka soo saarto Ciidamada ay geysay. Waxaa haatan shir u socdaa Madaxwey naha Jubbaland iyo Puntland oo ay ka wada hadlayaan arrimaha taagan iyo shuruuda Jubbaland ku xirtay kulankaas. Agaasimaha Warfaafinta Madaxtooyada ayaa Shalay duhurkii qoraal uu soo dhigay bar tiisa Twitterka ku shaaciyay kulanka Xalay ay yeelanayaan Madaxweyne Farmaajo iyo Mada xweynayaasha Jubbaland iyo Puntland, iyadoo qoraalkaas loo arkayay mid Madaxtooyada ku iclaamineysay kulanka, laguna qarinayay shur uuda Jubbaland saacadihii hore ee Shalay ka timid oo ka mid ahaa waxyaabihii uu la wadaa gay Madaxweyne Axmed Madoobe Safiirka Mareykanka. Shalayta ayay aheyd markii Madaxweyna ha Jubbaland iyo Taliyaha NISA kulan saaca do badan qaatay ay yeesheen, arrimaha laga wa da hadlay ka mid ahaa arrinta Gobolka Gedo.
Maxay ka wada hadleen Xasan Sheekh & Amb, Ambassador Donald Yamamoto?
Madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xas an Sh.Maxamuud ayaa Magaalada Muqdisho waxaa uu kula kulmay safirka Mareykanka u qaabilsan Soomaaliya Amb assador Donald Yamamoto.
Kulanka ayaa waxaa ay uga wada hadleen arimaha Siyaasadda Soomaaliya, ga ar ahaan Arrimaah doorasho oyinka Somaaliya ee sanadka 2021, iyada oo lagu guda jiro xilli kala guur ah.
Safirka Mareykanka u qaabilsan Soomaali ya Ambass ador Donald Yamamoto ayaa maa lmihii la soo dhaafay waxaa uu hor boodayay siyaasadda Soomaaliya, isaga oo mid mid ula kulmayay Saamileyda Siyaasadeed ee dalka.
Ambassador Donald Yamamoto ayaa Dorraad Muqdisho waxaa uu kula kulmay Madaxweyn ayaasha Puntland iyo Jubbaland, isaga oo ka la hadlay arrimo la xiriira xaalada dalka iyo kulanka ay la yeelan doonaan Madaxweynaha Soomaaliya.
Safaaradda Mareykanka oo shaacisay arri mihii ay kala hadashay Deni, Axmed Mado obe iyo Xasan Sheekh
Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ay aa qoraal ay soo saartay uga hadashay kulam adii uu safiirka Mareykan ka Donald Yamamo to Dorraad la yeeshay madaxweynayaasha Ju baland iyo Puntland, iyo kii Shalay ee mada xweyne Xasan Sheekh. Qor aalka safaaradda Mar ey kanka ayaa la gu she egay in danjire Yamamoto uu Axmed Madoobe iyo Saciid Deni ka la hadlay sidii loo dhamey stiri lahaa heshiiskii Dhuusamare eb 3, loona hirg elin lahaa.
"Safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya wa xay Dorraad la kulantay Axmed Madoobe iyo Sa ciid Deni. Waxay ku kals oon tahay in labadan si yaasi ay Villa Somalia kala shaqeyn doona an dhameystirka iyo fulinta heshiiskii Dhuusa mar eeb 3. Soomaaliya wa xay u baahan tahay he shiis iyo tanaasul. Wax aa la joogaa xilligii ay ho gaamiyayaasha muu jin lahaayeen xik mad,” ayaa lagu yiri qoraalka safaaradda.
Safaaradda ayaa sidoo kale sheegtay in dan jire Yamamoto uu Shalay kulan wax ku ool ah la yeeshay madaxweyne Xasan Sheekh Ma xa muud, kaasi oo sidoo kale looga hadlay he shi iskii Dhuusamareeb 3. Waxaa na dhiiri gel iyey in saamileyda siyaasadda Soomaaliya ay raa dinayaan tanaasul si waqtigiisa loogu hirgeliyo heshiiska Dhuusamareeb 3,” ayaa la gu yiri qo raalka. Safiirka Mareykanka ayaa la rume ysan yahay inuu ka dambeeyo in Axmed Mado obe iyo Saciid deni ay yimaadaan Muqdisho, si he shiis buuxa looga gaaro arrimaha doorashada Soomaaliya, kadib markii ay diid een heshiiskii Dhuusamareeb 3.
Madaxweyne Deni iyo siyaasiyiinta Mucaar adka ah oo kulan yeeshay
Madaxweynaha maamulka Puntland Siciid C/hi Deni iyo iyo Madaxda Madasha xisbiyada Qaran ayaa kulan xasaasi ah waxaa ay ku ye esheen Magaalada Muqdisho gaar ahaan gur iga Madaxweynih ii hore ee Somaliya Xasan Sheikh Maxamuud.
Madaxweyne Siciid Cabdullaahi Deni oo ay weheliyaan mas’uuliyiin ka tirsan Maamulka Puntland ayaa hoyga uu ka deganyahay Muq disho ku booqday Madaxweynihii hore ee So maliya Xasan Shiikh Maxamuud, Kulanka wa xaa ka qeybgalay Madaxda Xisbiyada Qa ran, Madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Sha riif Xasan Shiikh Aaden iyo Wafdiga Madaxwe ynaha oo ka koobnaa Wasiiro, Xildhibaa no, La taliyeyaal iyo Saraakiil Madaxtooyo.
Intii uu kulanku socday ayaa lagu faaqiday arrimo xasaasi ah oo la xariira shirka la filayo in muqdisho uga furmo Madaxweyne Farmaajo iyo Madaxda dowlad Goboleedyada Jubbaland iyo Puntland.
Madaxweyne Farmaajo oo daah furay Ma nhajka Waxbarashada Dugsiyada Sare
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed C/ll aahi Farmaajo oo ay weheliyaan Guddoom iyaha G/Banaadir Cumar Maxamuud Maxam ed (Finish), Wasiirrada iyo Agaasimeyaasha W/Waxbarashada XFS ayaa daah-furay Manh ajka Waddaniga ah ee Dugsiyada Sare ee dal ka. Madaxweynaha ayaa manhajkan ku daa hfuray Dugsiga Maxamuud Mire ee M/ Muqdi sho oo ardayda wax ka barta uu u qeybiyey bu ugaagta manhajka, waxa uuna ku dhiirri geliy ey inay ka miro dhaliyaan hiigsigooda qofeed iyo tacabka Dowladda iyo qoysaskoodu ay ku bixinayaan.
"Waxaa guul ah in ubadkeenu ay Shalay laga bilaabo wax ku baran doonaan Manhaj mi deysan oo ka turjumaya dhaqanka, sooyaalka iyo baahida dalkeenna. Dadaal dheer ka dib waxaaynu ku guuleysannay Manhajka Dugsiya da Sare iyada oo horey aynu u soo daahfur nay Manhajka dugsiyada Hoose iyo Dhexe.”
Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay in diyaarinta, daabacaadda iyo hubinta manhajk an ay tahay shaqo waddani ah oo bilow ilaa dhammaad ay qabteen khuburo Soomaaliye ed, taas oo muujinaysa kartida iyo aqoonta ba hda qalinleyda Soomaaliyeed.
Dhankiisa, Wasiirka Wasaaradda Waxbara shada iyo Tacliinta Saree ee Dalka Md.C/hi Go odax Barre ayaa tilmaamay sida Dowladda ay uga go’an tahay dib u soo nooleynta, mideynta iyo tayeynta nidaamka waxbarashada dalkee nna, iyada oo la kordhiyey maadooyinka Dugsi yada Sare, lana gaarsiiyey 13 Maaddo oo ku diyaarsan Afka Hooyo, Carabi iyo Ingiriisi.
Qoorqoor iyo Wafdi uu hoggaaminayo oo gaaray Jabuuti
Wafdi ballaaran oo uu hoggaaminayo Ma daxweynaha D/G/ Galm udug Axmed Cabdi Ka ariye ayaa Shalayta gaa ray M/DJabuuti ee Caa simadda dalka Jabuuti.
Waxaa garoonka Diyaa radaha M/Jabuuti si diir ran ugu soo dhawee yay madaxweynaha iyo wafdigiisa masuuliyiin kala duwan oo ugu horr eeyo Wasiirka Arrim aha Gudaha D/Jabu uti, wasiiro iyo xubno kale oo ka tirsan D/Jabu uti, Danjiraha Jabuuti u fadhiya Muq dishu iyo masuuliyiin sare.
Madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa booq asho rasmi ah ku gaaray dalka Jabuuti halkaas oo uu shirar muhiim ah kula yeelan doono ma daxda Jabuuti. Md.Qoorqoor ayaa safarkiisa wuxuu ku soo beegmayaa iyadoo Maamul G/yada Dalka 2 ka mid ah &Madaxweyne farmaajo uu shir furmay muqdisho.
Dowladda Soomaaliya oo ka qayb gashay shirka Urur Goboleedka IGAD
Sii hayaha Wasiirka Shaqada iyo Arrimaha bulshada ee Soomaaliya mudan Sadiiq Xirsi Warfaa ayaa fogaan arag kaga qeyb galay ku lan heer Wasiiro ah ee dalalka urur Gobole edka IGAD oo looga hadlayay saameynta dha qaale uu cudurka COVID-19 ku reebay dalalka IGAD.
Wasiir Warfaa oo qoraal kooban bartiisa soo dhig ay ayaa sheegay in Soo maaliya ay ka go’an tah ay in la dajiyo siyaasad ku aadan soo kabashada iyo abuurista fursado shaqo.
"Waxaan Shalay ka qeybgalay kulan heer Wasiirro ah ee dalalka urur-gobolleedka IGAD oo la xiriiray saameynta COVID-19 ee muhaaj iriinta. Soomaaliya oo ay ku soo laabanayeen kumannaan barakacayaal ah ayuu dhaqaalo ahaan u saameeyey, waxaana Wadamada xub naha ka ah IGAD la wadaagay sida ay nooga go’an tahay in aan si deg deg ah uga shaqey no siyaasadda ugu wanaagsan ee soo kaba shada iyo abuurista barnaamijyo waara oo wax looga qabanayo bulshooyinka ay dhibaatadu saameysey”. Ayuu yiri Wasiir Warfaa.
Gudoomiyaha Xisbiga Waddani "Balla nteenu Waa in aynu Takoorka la Dagaal anno”
Guddoomiyaha xisbiga mucaaridka ah ee WADDANI, mudane Cabdiraxmaan Maxamed C/hi (Cirro), ayaa bulshada Somaliland ugu ba aqay in meel looga soo wada jeesto la daga alanka Takoorka iyo faquuqa lagu hayo bulsho oyinka qaar Guddoomiyaha ayaa sheegay in loo baahan yahay dagaalka la dagaalka Takoorka in aan laga dhigin mid dhinacyo iskaga soo horjeedaan, balse loo baahan yahay in si wada jira loola dag aalamo takoorka hadday tahay cidda la takoo rayo iyo haddii ay tahay cidda wax takooreys aba.
Guddoomiyuhu waxaa uu intaas raaciyay in ay ka xisbi ahaan diyaar u yihiin inay wax la qa btaan beelaha Gabooye, islamarkaana dhan kooda gacan ka geystaan guud ahaan la dag aalanka takoorka
Guddoomiyaha oo waxaa uu sidan ka shee gay dood lagu falanqeynayay takoorka beesha Gabooye kala kulmaan bulshada dhexdeeda waxaanu yidhi. "Waa in aynaan isu qaybin qa ar wax dulmaya iyo qaar la dulmayo balse dag aalka aan meel uga soo wada jeesano, oo ka wax dulmayana laga xoreeyo dulmiga, ka la dulmayaana iska xoreeyo dulmiga.
Balanteenu waxaa weeyi in aynu takoorka la dagaalano, beelaha sida gaarka ah loo tako oray iyo ciddi kale ee la takoorayaba hadii ay tahay hablaha, haday tahay dadka naafada ah, takoor oo dhan ayaa inoo balan ah in aynu la dagaalano”
Ciidan Cusub oo Tababar looga furay Dugs iga tababarka kumaandooska Danab
Waxa tababar loo furay ku dhawad 300 ciid ana ah, kuwaas oo Looga furay Dug siga ta babarka ciidamada kumaandooska Danab ee Balidoogle.
Waxana Tababarka u furay Abaanduulaha Guutada 16-aad ee kumaandooska Danab ee Ciidanka Xoogga Dalka Soomaaliyeed G/Le Axmed C/laahi Nuur Be er yare iyo Sarakiil kale ee Ciidanka Xoogga Dal ka Soomaaliyeed.
Ayagoo halkaas lagu si in doono Tababar aad u heer sare ah sida ay sheegeen Sarakiisha tababarka bixinaya.
Waxana siibadana dhalin yarada Aqoonta leh ee kuso biraya ciidanka xoogga Dalka soo maaliyeed, kuwaas oo sanadahii danbe ku biirayay Ciidanka dalka.
Dhallinyarada ku biiraya Ciidanka ayaa isu gu jira Heer jamacaded iyo Xerfad yaqaaniin ah kuwaas oo u muhiin ah ciidanka Xoogga dalka Soomaaliyed, waxaana Saraakiisha Tab abarka bixinaya ay warbaahinta u sheegeen in Ciidanka Cusub ay mas’uuliyad gooni ah iska saari doonan.
Dowladda oo sheegtay inay xadideyso Ajaanibta soo gasha dalka
Agaasimaha hay’adda socdaalka iyo jinsiy adda Soomaaliya Gaashaanle Sare Maxamed Aadan Jimcaale (Koofi) oo faahfaahin ka bixy ey ahmiyadda shirka laamaha hay’adda uga fu rmay caasimadda Galmudug, ayaa sheegay in ay uga muhiimsan tahay isku xirka hay’adda Socdaalka & jinsiyadaha, si loo ogaado dhamaan dadka dal ka kasoo galaya xuduuda ha dhan ka dhulka ah.
Agaasime koofi ayaa sheegay inay aad uga shaqeeyeen bixinta baasa boor ka hagaajinta, iyo sumcada baasaboorka, iya da oo la saxayo shaqooyinka lagu qoro baasa boorka, oo markii hore aheyd in qof walbo wixii uu doono iskaga qoran jiray, balse arrinkaas ay ku guuleysteen in ay saxaan sadexdii bilood ee lasoo dhaafay.
Sidoo kale Agaasimaha Hay’adda Socdaal ka iyo jinsiyadaha Soomaaliya ayaa tilmaamay inay ku guuleysteen diiwaan gelinta ajaaniibta dalka soo galay, taasi oo qeyb ka ah dadaala da ay ku doonayaan in ay ogaadaan ajaaniibta soo gasha dalka.
Duqa Muqdisho oo u dabaaldegay sanad ka dib magacaabidiisii
Gudoomiyaha G/Banaadir ahna Duqa M/ Muqdisho, Cumar Maxamuud Maxamed (Cu mar Filish) ayaa M/Muqdisho ku qabtay mun aasabad lagu xusaayo sanad guuradii 1aad ee ka soo wareegatay mar kii uu xilka la wareegay.
Munaasabadda oo ka dhacday Xarunta Dhalinyarada ee G/ Banaadir ayaa waxaa ka qaybgalay Wasiiro, Xildhibano, Siyaasiyiin, G/Ku xigeenada Ma amulka G/Gud oomiye-yaasha Degmooyinka G/Banaadir iyo marti sharaf kale. Xubnihii ka qaybgalay munaasab adda ay aa G/G/Banaadir ku ammaanay in arr imo bad an uu wax ka qabtay, xilli la fahamsan yahay in amnigii Caasimadda Muqdisho aanu cago ba dan ku taagnayn.
Duqa Muqdisho oo ka hadlay munaasabad da ayaa ka sheekeeyay waxyaabihii u qabso omay iyo wixii aan u qabsoominba, oo sida uu qirayba aanu amniga ahayn, sidii la rabay.
Sidoo kale waxaa uu sheegay sheegay in xi rnaanshaha wadooyinka ay ka mid yihiin wax yaabaha aan illaa iyo hadda maamulkiisa u qa bsoomin,bacdamaa uu sanad ka hor ball anqa aday in si deg deg ahi uu dhegxaanta uga qaa di doono wadooyinka, kuwooda xiran.
Waxaa uu sheegay in caqabado is biirsad ay ay sabab u noqdeen inaanan dib loo furin wadooyinka, kuwaa oo uu kala sheegay xaa ladda amni ee Magaalada, faafitaanka xanuun sidaha COVID-19, oo kiisas fara-badan laga dii waangeliyay Caasimadda Muqdisho iyo roob ab xoogan oo magaalada ka da’ay mudadii uu xafiiska joogay, xilli aanay horey uga da’i jirin roobab sidaasi oo kala ah.
Duqa Muqdisho ayaa tilmaamay in dadka reer Muqdisho ay jeclaan lahaayen in dib loo furo waddooyinka, hase ahaatee aanay u suu rtagelin. Waxaa uu sheegay in DFS ay ciidan fara-badan geysay G/Sh/Hoose & Sh/Dhexe, haddii amniga goboladaasi ay wax ka qabtaa na uu markaasi soo hagaagi doono amnigii Caasimadda.
Muddo sanado ah ayaa waxaa xiran wado oyinka halbowlaha u ah isu socodka M/Muqdi sho, taasoo ka dhalatay weerarada is qarxinta, ee ay ka gaysanayan mintidiinta Ururka Al Shab aab.
Dagaal ka dhacay G/Jubbada Hoose & faah faahin laga helayo
Dagaalkaan oo geystay khasaaro kala du wan ayaa waxaa uu duleedka degmada Afma dow ee G/Jubbada Hoose ku dhex-maray Cii damada Kenya ee ka tirsan howlgalka Mido wga Afrika ee AMISOM iyo Al-Shabaab.
Dagaalka ayaa yimid, kadib markii Kolonyo Gaadiid ah oo ay wateen Ciidamada Kenya ay weerar jidgal ah ku qaadeen Xu bno ka tirsan Al-Shabaab, xilli ay marayeen duleedka deg mada Afmadow, waxaana halkaasi ka dhacay dagaal qaatay ku dhawaad saacad.
Dadka ku nool degmada Afmadow ee G/Jubbada Hoose ayaa waxaa ay sheegeen in Ciidamada Kenya ay ka baxeen degmada, hayeeshee ay weerarkaasi la kulmeen xilli ay marayeen meel aan ka fogeen Afmadow, si doo kalena ay maqlayeen dhawaqa rasaasta ay isku adeegsanayeen labada dhinac.
Wararka la helayo ayaa waxaa ay sheegaya an inuu jiro khasaaro Ciidamada Kenya kasoo gaaray weerarkaas, hayeeshee dadka degaan ka ay ku waramayaan in Ciidamada weerarka ka dib ay socdaalkoodii ay iska sii wateen.
Ciidamada Kenya ayaa goobjoogayaasha waxaa ay sheegeen in xilliga la weerarayay ay wadeen howlgallo amni xaqiijin ah oo mararka qaar ay ka sameeyaan degaannada Gobolada Jubbooyinka howlgallad aas oo u badan kuwo mi ino baaris ah. Dhowr jeer oo hore ay aa dag aalo u dhaxeey ay Ciidamada Dowladda & ku wa Kenya oo dhi nac ah iyo Al-Shabaab uu ka dhacay degaano ka tirsan Gobolada Jubbooy inka,iyada oo ay kordheen maalmahaan weera rada ka dhaca Gobolka Jubbada Hoose
Prof. Cabdi Ismaacil Samatar oo shaac iyey arrin yaab leh oo ay ku adkeysana yaan Axmed Madoobe iyo Deni?
Madaxweynayaasha maamullada Jubbal and iyo Puntland oo si weyn uga soo horjeeda DFS ayaa haatan ku sugan Muqdisho, iyaga oo wada-hadallo kula leh Madaxweyne Farm aajo. Axmed Madoobe iyo Siciid Deni ayaa qa ba tabasho ay ka muujinayaan heshiiskii lagu gaaray M/Dhuusamareeb, kaas oo ay ka maqn aayeen, balse waxaa haatan qorshuhu yahay in laga wada-hadlo arri mahaasi oo dhan, si xal mideysan looga gaaro.
Sidoo kale Madaxweyna yaasha maamullada Jubbaland ayaa ‘u adkey san waayey’ in DFS ay sii shaqeyso, marka uu dhammaado muddo xileedkeeda.
Sida uu BBC-da u sheegay Prof Cabdi Ism aaciil Samatar oo ka faalooda arrimaha Afrika waxay madaxda dowladda dhexe iyo Jubbala nd iyo Puntland arrimaha ay ka wada-hadlaya an ka mid ah sidii loo dhisi lahaa dowlad, mar ka uu dhammaado muddo xileedka dowladda uu hogamiye Madaxweyne M.C/hi Farmaajo.
Sidoo kale wuxuu intaasi ku daray in laga ma maarmaan ay tahay in la soo dhiso dow lad, si looga baaqsado xasilooni darro siyaa sadeed oo timaada.
"In horta dowlad la soo dhiso lagama ma armaan weeye oo xitaa dowlad aan kumeel ga ar aheyn in meesha ay iska joogto waa sharci darro. waxyaabaha ay ku adkeysanayeen we eyaan Deni iyo Axmed, waana lagama maarm aan in dowladi ay jirto,” ayuu yiri Prof Cabdi Ismaaciil Samatar.
Ugu dambeyn Prof Cabdi Ismaaciil Samat ar ayaa xusay inuu rajeynayo in wada-hadall adu ay ka soo bixi doonaan heshiis dambe oo aad looga soo shaqeeyey.
"In meeshaas uu ka soo baxo heshiis dam be oo dib loo lafagurayo wixii lagu heshiiyay shirkii Dhuusamareeb ee ay ka maqnaayeen.” ayuu sii raaciyey.
Hadalkan ayaa ku soo aadaya, iyadoo Xalay ay si rasmi ah u bilaaban doonaan wada-hadal lada 3geesoodka ah ee u dhexeeya dowladda dhexe, Jubbaland iyo Puntland.
Maamulka Puntland oo Irdaha isugu laabay afar dugsi sare
Wararka aan ka helayno M/Gaalkacyo ee xarunta G/Mudug ayaa sheegaya in maamulka Puntland uu Al-baabada u laabay Dugsiyo ku yaalla M.Ciidamada Booliska G.Mudug ee Pun tland ayaa irridaha isugu laabay afar dugsi sa re oo ku magaalada Gaalk acayo, kuwaas oo dowlad du ku eedaysay in ay baal-mareen sharciga waxbara shada Puntland, sida uu sheegey Guddoomiy aha Waxbarashada Mudug.
Maamulayaashii 4-ta dugsi iyo macallin ka le ayaa sidoo kale xabsiga la dhigey Dad goob joogayaal ah ayaa inoo xaqiijiyay in dugsiyada asi lagu dhiganayey manhajka waxbarashada Soomaaliya, balse Puntland way beenisay arr intaasi, iyada oo dugsiyadaas ku sheegtay ku wa qas-wadayaal ah.
Wararku waxaa ay sheegayaan in Ardaydii dhiganaysay dugsiyadaas ay tageen saldhigga dhexe ee Gaalkacayo, iyagoo ka cabanaya sa babta loo xiray dugsiyada ay wax ka baranay een balse Booliska ayaa rasaas ku kala eryey.
ma jiro wax war ah oo kasoo baxay wasaarad da waxbaarshada maamul Goboleedka Punt land oo ay kaga hadlayan dugsiyadaas irdaha loo laabay
Kulan lagu taageerayay guddi uu dhowaan magacaabay Madaxweynaha Hirshabelle oo Beledweyne ka dhacay
Qaar ka mid ah odayaasha iyo waxgaradka G/Hiiraan ayaa si weyn u soo dhoweeyay gud diga farsamada soo xulista baarlamaanka 2a ad ee Hirshabelle ee dhowaan
uu magacaabay Madaxweynaha dowlad G/ Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare.
Odayaashan oo shir jaraa’id ku qabtay Shalay M/Beledweyne ayaa ku tilmaamay gud digan uu soo magacaabay Madaxweyne Wa are inuu yahay guddi si caddaalad ah loo soo xuay ayna soo dhoweynayaan.
"Waxaan soo dhoweyneynaa oo aan taage ere u muujineynaa guddiga 11ka ah, waxaana kula dardaarmeynaa inay waajibkooda si wana agsan u gutaan.”ayuu yiri Mid ka mid ah oday aashii ka qeybgashay kulankii Shalay lagu taagereayay guddigan.
Sidoo kale duqeydan ayaa waxa ay shee geen in Madaxweynaha Hirshabelle uu cadd aalad muujiyay isla markaana ay ka rajeynay aan in gudigan uu noqdo mid ku hogaamiya shaca bkooda cadaalad iyo sinnaan.
Hore ayaa odayaasha dhaqanka iyo waxg aradka ku nool G/Sh/Dhexe waxa ay u soo dhoweeyeen una taageereen guddiga farsamo ee soo xulista xildhibaanada baarlamaanka Hirshabelle.
Dhowaan ayaa lagu wadaa in guddigan ay soo bandhigaan qorshihii ay ku soo xuli lahaa yeen xildhibaanada baarlamaanka 2aad ee Hir shabelle.
Cawad: Soomaalida waxay noqoneysaa qow miyadda ugu faa’iidada badan iska ashi kasta oo ka dhaca Geeska Afrika
Axmed Ciise Cawad, Sii Hayaha Wasiirka Arrimaha Dibadda Somaliya ayaa sheegay in Soomaalida ay noqon doonto qowmiyadda faa ’iidada badan iskaashi kas ta oo ka dhaca Geeska Afrika.
"Soomaalida waxay noqoney saa qowmiy adda ugu faa’id ada badan iskaashi kasta oo ka dha ca Bariga iyo Geeska Afrika. ” Ayuu yiri Sii Hayaha Wasirka Arrimaha Dibada
Wasiir Cawad ayaa warkan ku sheegay mu uqaal Shalay lagu daabacay barta Machadka Heritage uu ku leeyahay shabakadda bulshada wax ku qorto ee Twitter-ka.
Halkan ka daawo muuqaalka Wasiirka